सोमबार नेप्से ३३.२७ अंकले बढ्यो , नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको सबैभन्दा बढी कारोबार - Aarthiknews
सोमबार, १२ माघ २०७७ Monday, 25 January, 2021
सोमबार नेप्से ३३.२७ अंकले बढ्यो , नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको सबैभन्दा बढी कारोबार
काठमाडौं । सोमवार नेप्से परिसूचक ३३ दशमलव २७ अंकले बढेर १ हजार २९८ दशमलव ७३ विन्दुमा पुगेको छ । आइतवार १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार भएको नेप्सेमा सोमवार भने ९२ करोड ७८ लाख ४१ हजार बराबरको कारोबार भएको छ ।
यस दिन १७८ कम्पनीको १७ हजार ३८४ पटकको व्यापारमा २७ लाख ३१ हजार ४९८ कित्ता शेयर कारोबार भएको हो । ठुला कम्पनीहरुको कारोबार मापक सेन्सेटिभ इन्डेक्स पनि ६ दशमलव ३० अंकले बढेर २७५ दशमलव ८८ विन्दुमा पुगेको छ । विहिवार नकारात्मक सर्किट सहित ८० अंक घटेको बजार आइतवारदेखि बढेको छ । आइतवार ९ दशमलव ३५ अंकले नेप्से परिसूचक बढेको थियो ।
सोमवार कारोबारमा आएका १२ समूहमध्य म्युचुअल फण्डको परिसूचक घटेको छ भने बाँकी समूहको बढेको छ । यस दिन म्युचुअल फण्डको परिसूचक शून्य दशमलव ६७ प्रतिशतले घटेको हो । यो अवधिसम्म बैंकिङ समूहको १ दशमलव ९६ प्रतिशत, व्यापारिक समूहको १ दशमलव ७८ प्रतिशत, होटल समूहको १ दशमलव ७८ प्रतिशत , विकास बैंक समूहको शून्य दशमलव ८५ प्रतिशत रहेको छ ।
जलविद्युत समूहको १ दशमलव ३५ प्रतिशत, वित्त समूहको शून्य दशमलव ४ प्रतिशत , निर्जीवन बीमा समूहको ४ दशमलव ९८ प्रतिशत, उत्पादन तथा प्रशोधन समूहको १ दशमलव ७३ प्रतिशत, अन्य समूहको ४ दशमलव २६ प्रतिशत, लघुवित्त समूहको ४ दशमलव शून्य ३ प्रतिशत र जीवन बीमा समूहको ३ दशमलव ५४ प्रतिशत परिसूचक बढेको छ ।
सोमवारको कारोबारमा सबैभन्दा बढी रकमको नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको शेयर कारोबार भएको छ । यस कम्पनीको १४ करोड ५३ लाख ३१ हजार रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको शेयरमूल्य ४० रुपैयाँ ले बृद्धि भएको छ । यस कम्पनीको शेयरमूल्य १० प्रतिशत बढेर सकारात्मक सर्किट लागेको छ ।
नेपाल पुनर्बीमासँगै यो दिन ग्लोबल आइएमई लघुवित्तको शेयरमूल्य पनि १० प्रतिशत बढेर सकारात्मक सर्किट लागेको छ । यस कम्पनीको शेयरमूल्य सोमबार १२० रुपैयाँ ले बढेको हो । बढेको बजारमा सोमबार सबैभन्दा बढी राधी विद्युत कम्पनीका शेयरधनीहरुले गुमाएका छन् । यस कम्पनीको शेयरमूल्य १० प्रतिशत घटेर नकारात्मक सर्किट लागेको छ । सोमवार राधीको शेयरमूल्य १८ रुपैयाँ ले घटेको छ ।
नेप्से २ दशमलव ६३ प्रतिशतले बढ्दा १२ सय ९८ दशमलव ७३ अंकमा पुगेको छ । क वर्गका कम्पनीहरुको मापक शेन्सेटीभ इन्डेक्स पनि ६ दशमलव ३० प्रतिशतले बृद्धि हुँदै २ सय ७५ दशमलव ८८ अंकमा पुगेको छ । यो २ दशमलव ३४ प्रतिशतको बढोत्तरी हो ।
सोमबार जम्मा १ सय ७६ कम्पनीको २७ लाख ३१ हजार ४ सय ९८ कित्ता शेयर कारोबार हुँदा बयानब्बे करोड ७८ लाख ४१ हजार माथीको कारोबार भएको छ ।
आज म्युचुअल फण्डबाहेक सम्पूण उपसूचकहरु हरियाली देखिएको छ । आज सबैभन्दा धेरै कमाउनेमा ग्लोबल आइएमई लघुबित्त, नेपाल रि–इन्स्योरेन्स कम्पनी, सुर्योदय लघुबित्त लगाएतका कम्पनीका शेयरधनीहरुले नाफ कमाएका छन् । भने धेरै गुमाउनेमा राधी बिद्युत कम्पनी, बेटलर्स नेपाल लगाएतका कम्पनीका लगानीकर्ताहरु रहेका छन ।
साथै, नेपाल रि–इन्स्योरेन्स कम्पनीको १४ करोड ५३ लाख माथीको कारोबार भएको छ ने दोस्रोमा नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको ७ करोड ८० लाख माथीको कारोबार भएको नेप्सेले जनाएको छ ।
यस दिन म्युचुअल फण्डको परिसूचक शून्य दशमलव ६७ प्रतिशतले घटेको हो । यो अवधिसम्म बैंकिङ समूहको १ दशमलव ९६ प्रतिशत, व्यापारिक समूहको १ दशमलव ७८ प्रतिशत, होटल समूहको १ दशमलव ७८ प्रतिशत , विकास बैंक समूहको शून्य दशमलव ८५ प्रतिशत , जलविद्युत समूहको १ दशमलव ३५ प्रतिशत, वित्त समूहको शून्य दशमलव ४ प्रतिशत , निर्जीवन बीमा समूहको ४ दशमलव ९८ प्रतिशत, उत्पादन तथा प्रशोधन समूहको १ दशमलव ७३ प्रतिशत, अन्य समूहको ४ दशमलव २६ प्रतिशत, लघुवित्त समूहको ४ दशमलव शून्य ३ प्रतिशत र जीवन बीमा समूहको ३ दशमलव ५४ प्रतिशत परिसूचक बढेको छ ।
सोमवारको कारोबारमा सबैभन्दा बढी रकमको नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको शेयर कारोबार भएको छ । यस कम्पनीको रू. १४ करोड ५३ लाख ३१ हजार बराबरको कारोबार भएको छ ।
नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको शेयरमूल्य रू. ४० ले बृद्धि भएको छ । यस कम्पनीको शेयरमूल्य १० प्रतिशत बढेर सकारात्मक सर्किट लागेको छ । नेपाल पुनर्बीमासँगै यो दिन ग्लोबल आइएमई लघुवित्तको शेयरमूल्य पनि १० प्रतिशत बढेर सकारात्मक सर्किट लागेको छ । यस कम्पनीको शेयरमूल्य सोमबार रू. १२० ले बढेको हो ।
बढेको बजारमा सोमबार सबैभन्दा बढी राधी विद्युत कम्पनीका शेयरधनीहरुले गुमाएका छन् । यस कम्पनीको शेयरमूल्य १० प्रतिशत घटेर नकारात्मक सर्किट लागेको छ । सोमवार राधीको शेयरमूल्य रू. १८ ले घटेको छ ।
नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकलको शतप्रतिशत हकप्रद मंगलबारदेखि विक्रीमा
नेप्से उच्च विन्दुमाः १६.०४ अंकले बढ्यो, ८ अर्ब ९० करोडको कारोबार
महासंघले गर्यो कर तथा राजस्व समिति गठन
निर्वाचनमा गरिने खर्च फजुल खर्चको रुपमा चित्रण नगर्न अर्थमन्त्रीको आग्रह
सिटिजन्स बैंकका ग्राहकलाई वन डे थ्रिडी आर्ट रेष्टुरेन्टमा विशेष छुट
कोरोनाका कारण स्वास्थ्य मन्त्रालयका कर्मचारीको मृत्यु
करिब ३ सय ४५ ग्राम अवैध सुन सहित पक्राउ
६ महिनामा ९ अर्बभन्दा बढी शेयर बजारबाट उठ्यो पुँजीगत लाभकर
इसेवा १२ औँ वर्षमा, खाता खोल्नेको संख्या ४० लाख नाघ्यो
कुमारी बैंकले एक अर्बभन्दा बढी नाफा कमायो
सोमबार तीन कम्पनीको शेयरमूल्य समायोजन